RHONY Ixesha lesi-6, Isiqendu 11: Ibali lokuPhazamiseka kwabaNtu abaBini - Itv
Eyona Itv RHONY Ixesha lesi-6, Isiqendu 11: Ibali lokuPhazamiseka kwabaNtu abaBini
RHONY Ixesha lesi-6, Isiqendu 11: Ibali lokuPhazamiseka kwabaNtu abaBini
Isenokuba yi-rosé exutywe ne-tequila, utshilo uCarole, evakala ngathi indibaniselwano ebulalayo. Kanye xa wonke umntu ecinga ukuba ayinakuba mbi, umhlohli weyoga utsala indlela. Nditsho oku njengomntu othanda i-yoga: umntu kufuneka aye kude kangakanani ehlathini ngaphambi kokuba aqinisekiswe ngokungamangaliswa sisifundo seyoga ngokuxhonywa ngaphaya kwentsasa?
Emva kokukhubeka kwiyadi ekhanyiswe lilanga okomntwana wexhama eme okokuqala, uSonja ubambelele kwimethi yakhe yeyoga kwiingalo zakhe kunye nedolo elinye elinye umlenze emoyeni, eqhubeka nokusela ikofu. Wonke umntu uyahamba. Ubungangamsha obucocekileyo!
Emva koko, sabuyela esixekweni, apho uCarole noLuann badibana khona ngenxa yokupha izipho. UCarole unekholamu kwi Idolophu kunye nelizwe malunga nemikhwa engafanelekanga ukuba ayibhale, ngokusekwe kwindawo eyandisiweyo apho abuza khona uLuann malunga nokufumana umntu kumhla wokuzalwa kwakhe ukuba ubuthandana nje iiveki ezimbalwa kwaye usenokuba okanye awukabinaso isondo. UHeather noKristen badibana eCentral Park ukuze bathethe ngesicwangciso songenelelo lukaRamona. Bayangqina ngonyana kaKristen uCash, ofuna nje ukutya umnumzana Softee ngoxolo, ukuba uyazi ukuba ukuphosa izinto ebantwini akulunganga ( Ndingathanda ukuziphosa kulo mthombo nangona - I-monologue yangaphakathi yeCash) kunye nesifungo sokuba uRamona ahlawule.
Ekugqibeleni, ixesha lifikile. Amanenekazi afika kwangoko kwivenkile yokutyela, ekhetha indawo yokuhlala ukuze kugcinwe uRamona angabaleki. UCarole unxibe ibhatyi emhlophe egqwesileyo kaBob Fosse-esque + iibhulukhwe ezimfutshane + zomhlangano, ngelixa uHeather ekwibhotile ebomvu epinki elungele uMyuzi wam uBarbie. Isinxibo seBonkers ecaleni, amanenekazi eze elungiselelwe. Xa uRamona efika uLuann utyibilika kwindlwana esecaleni kwakhe.
Ndifana ne-backbacker yee-49ers. Kwakungekho ndlela yokuba avuke. Oku kufana nohlobo lukaBravo lwe Ulwamvila!
UKUTHETHA I-HAMPTONS, BABENZA NJANI I-MOLLY SIMS? Ubala obala ubuza ngentshayelelo encinci. Kuqala uRamona uzama ukuphendula ngoncumo olungenanto, olunobuso, kodwa kungekudala akakwazi kuzinceda.
Ndizamile ukuyenza kwaye ndikufumene kunzima kakhulu, utsho malunga nokubuzwa ukuba ube lundwendwe endlwini kaHeather eyoyikekayo yoburhalarhume ubusuku obubini.
Kutheni uhamba ngayo yonke le mveliso ukuba ufuna ngokwenene ukuya kwiiHamptons? USonja ubuza, ngokufanelekileyo.
Ndaba novalo ehlathini, ke uyazi? Ukujija nonke ngokungayifumani, uRamona uyakhwaza, emva koko aqale ukukhala NGABA UNGANDIVUMELA NDIGQIBE kunye nezinye incoko ezifanayo xa amantombazana azama ukuphendula.
Bahamba baya kwi-Wineglassgate. Yayiyindlala, andinayo imiba yomsindo, utshilo uRamona, evuma ngokwenyani ukuba wayenemicimbi enzulu yomsindo kangangokuba wasabela ngogonyamelo engakhange acinge emntwini omdlalayo echibini.
Andazi ukuba uRamona une-PTSD, andinguye ugqirha… kodwa ndiyazi ukuba uyaluphumelela olo xinzelelo ngokukhawuleza, utshilo uSonja, eqhubeka nokusothusa sonke ngokucinga kwakhe okuqinisekileyo. Ekugqibeleni, uhlobo lukaRamona lucel'ixolisa (emva koko laphinda laphinda lahlangana kwakhona emva kwexesha njengoMario, okwenzeka xa wayepompa isinyithi kwigumbi lakhe lokulala ngee-bangs zakhe kwi-curler kunye nebhotile ebomvu kwitafile ekufuphi njengesizathu, esinye yeendawo ezintle zokubeka amehlo am ngo-2014). Yinto encinci yokuchasana.
Kodwa linda-izinto sele ziza kuba mnyama ngakumbi. Njengoko sifundile ekuqaleni kwesizini, intombi kaKristen u-Kingsley uneenyanga ezili-17 ubudala kwaye uqala ukukhathazeka ngokukhula kwakhe, nanjengoko engahambi. Unomzimba osebenza emzimbeni oza kusebenza nabo bobabini rhoqo, kwaye wacela uJosh ukuba abekho. Inqaku loku-odola: iseshoni yonyango lomzimba yinto encinci yemizuzu engama-30 ubude.
Ngokukhawuleza uJosh woyikeka ngokuba kufuneka athathe ixesha phakathi [kwemini] yakhe ukunceda umfazi wakhe nosana, ekhalaza kunyango ngokwasemzimbeni malunga nokuqeshwa kungalunganga kwaye kuphendula ii-imeyile endaweni yokuhoya ngexesha leseshoni.
UKristen, eneentloni, umcela ukuba abeke ifowuni yakhe, ngelo xesha bayaxabana malunga nokuba ngubani ovuka kwangoko kwaye enze ntoni nabantwana ntsasa nganye. ( Akukho malunga nawe! - U-Kingsley kunye no-Kingsley's therapist'd monologue yangaphakathi).
Emva kokuqeshwa kugqityiwe, kuba khumbula, YIMIZUZU EPHAKATHI KWAMASHUMI AMATHATHU, uKristen wenza eyona nto ibalulekileyo yokuba ukuba uJosh ebekwintlanganiso engamashumi amathathu yemizuzu ebeya kubamba ukuthatha ezinye iifowuni ukujongana nomsebenzi lowo. Uyamxelela ukuba uvuke kwangoko nabantwana bakhe iintsuku ezintandathu ngeveki ngokomndilili kwaye wakha ishishini kwaye akanakukhathazeka, ngokusisiseko. Ukwathi kuye Funeka uxhase, Sukukhathazeka, kwaye Kutheni ucinga ukuba andizukuza ekhaya? Akukho kutya etafileni.
UKristen akambeki emlilweni, kodwa ixesha alikapheli.
Sifumana isicoci senkalipho ngohlobo lukaLuann emisela iBFF entsha uCarole kunye nomlingisi uNick Gregory, owaziwa kakhulu ngokuba ngumfo ombonileyo Umthetho kunye noMyalelo xa wawudlula kwigumbi lokuhlala ngokufutshane ukuya ekhitshini ngo-2002. Uyinzwana kuTata ovela ku Ubomi bonke Umboniso bhanyabhanya (ongengobubi), kwaye uCarole uyathandeka xa ethandana. Ufana nerobhothi engasebenzi kakuhle, ukhafula amanani angacwangciswanga kumanqaku awafunda kuwo Uhlanga lonke in 1997, talking to Luann about how the date is going while still on the date, and telling us in a interview I meet guys through friends, or late at night in bars when I had too much tequila. Yifumane, ntombazana.
Indawo yokugqibela yesiqendu inoRamona kunye no Ukujika Intlanganiso kaKristen yeti kwi-Upper East Side. URamona unika iintyatyambo zakhe kunye nokumisa uxolo, eneentloni endibetha njengokunyaniseka. Endaweni yokuqhekeza inyama yenkomo, uKristen unyanzelisa ukoyisa uRamona malunga nokuba unengxaki yokusela okanye ingxaki yokulawula umsindo. Ndiyathetha… imibuzo efanelekileyo, kodwa kulunge kakhulu ekuhlaleni ukwamkela uxolo kwaye uqhubeke (kwaye ngokucacileyo ndihleba ngokubhekele phaya malunga nabanye abantu, andikho ngqiqweni).
Uye wagqiba kwelokuba lelona themba lakhe libalaseleyo lomxholo webali okanye uyilahlekisa ingqumbo yakhe kumyeni wakhe we-monster ku-Ramona ukuze angazenzi i-mariticide. Ndiyayifumana, kodwa nayo inokuma ukuyithatha phantsi kwenotshi.
Mhlawumbi unemicimbi kunye nemiba yam, kodwa andinayo imiba, u-Ramona sputters, emva kokuba ubuyisiwe ukuba ube nomsindo. UKristen uphuma ngaphandle. Intetho emnandi.
Kwiveki ezayo: Ukubuya kukatata owoyikisayo ka-Aviva! Sonja, usengozini ntombazana!
I-HBO kunye ne-HBO Max Yamkela iAvalanche ye-IP ezayo ye-blockbuster
U-Yoko Ono akazange ahlukane neBeatles, uJohn Lennon Ngaba
Ukutyala imali kwiXesha leCoronavirus: Ngaba ngoku lixesha lokuthenga iSitokhwe seBiotech?
Sisaleqa uPhakamileyo 'Ngaba unamava' kwiminyaka engama-50 kamva
imveliso yeenwele ukukhula iinwele ngokukhawuleza
isuka phi inqanawa yesammydress
ukubuyisela umva kwifowuni ngaphandle kweziphumo zamagama
ingaba kulungile ukuthi usuku oluhle lwesikhumbuzo
ukuba ufuna ukuqokelela ubusi sukukhaba phezu kwendlu yeenyosi